samedi, 04 avril 2020 09:15
Ankarafantsika: Voasambotra ireo andian'olona manapaka hazo sy manao saribao any anaty ala arovana
Nosamborin'ny Brigade Mixte ny andian'olona tao Ankarafantsika nararaotra manapaka hazo sy manao saribao any anaty ala arovana. Toro avy amin'ny zanabolana mahakasika ny fisiana afo no nanaitra ny tomponandraikitra ka nirotsaka an-tsehatra avy hatrany ny Task-Force tao amin'ny Sampandraharaha iraisam-paritra miadidy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Boeny sy Betsiboka miaraka amin’ny ekipan'ny Madagascar National Park, Fikambanana ifotony, zandary, … nijery ny zava-misy sy nisambotra an’ireo andian’olona ireo izay hatolotra avy hatrany ny Fitsarana. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 04 avril 2020 08:40
Fanaparitahana sary mamoafady : Nidoboka ilay tovolahy ao Toamasina
Voasambotry ny Zandarimaria tao Toamasina ny tovolahy iray mpiserasera amin’ny Facebook noho ny fanaparitahana sary mamoafady tamin’ny tambajotran-tserasera Facebook. Tranga iray tany ivelan’i Madagasikara ahitana fampiasana zaza tsy ampy taona amin’ny atao hoe "exploitation sexuelle" no naparitak’ity tovolahy ity tamin’ny tambajotran-tserasera teto Madagasikara. Natolotra ny fampanoavana izy, ary notànana am-ponja vonjimaika. Fanaparitahana sary sy horonan-tsary mamoafady no vesatra anenjehana azy.
vendredi, 03 avril 2020 18:14
Andohatapenaka: « Grossiste » zava-pisotro mahamamo iray no nambenan'ny Polisy tsy hivoha intsony
Mpamongady zava-pisotro iray mahamamo etsy Andohatapenaka – Antananarivo no voatery nambenan'ny Polisy tsy hivoha intsony, androany, satria sady manokatra ny tsena izy no mampitangorona olona maka entana ao aminy ihany koa. Ireo mpamongady sy mpivarotra enta-madinika ilaina amin'ny fiainana andavan'andro ihany no mahazo alalana mivarotra hatramin'ny 12 ora atoandro ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara izao. Efa nisy ny fampitandremana nataon'ny Polisy ny tompon’ity tranombarotra mpamongady ity saingy mbola nanao ihany izy ka izao nandraisana fepetra izao. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 02 avril 2020 17:32
Hala-jaza: Very tany Ankiliabo Manja, hita tao Andranovory Toliara i Tovonasy, 11 taona
Nisy mpangala-jaza varira na zaza bobo, tratra tao Andranovory Toliara ny antoandron’ny alarobia 1 aprily 2020. Noho ny fiaraha-miasan'ny Fokonolona sy ny Zandary, jiolahy 02 no voasambotra. Zazalahy 11 taona antsoina hoe : Tovonasy ity niharan’ny fakana an-keriny ity. Araka ny loharanom-baovao dia efa tamin’ny 27 febroary 2020 ilay zaza no nalaina an-keriny tany Fenoarivo Avaratra Ambiky, Kaominina Ankiliabo, Distrikan’i Manja. Efa vonona teo Andranovory ny fiara 4x4 Huyndai Terracan hitondrana ilay zaza, sy ireo olona nitondra azy, izay samy tra-tehaka avokoa. Manao fanadihadihana lalina ny Zandarimariam-pirenena momba ny antony hangalana an-keriny zaza varira, hamongotra ny tambazotra sy hisambotra izay rehetra tafiditra amin’ity raharaha ity. (Jereo Sary Tohiny)
Praiminisitra Ntsay Christian: Nijery ifotony ny fampiharana ireo fepetra napetraka ho fiarovana amin’ny fianaky ny Coronavirus
Nampivory ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tao Nosy Be sy Mahajanga ny Praiminisitra, Lehiben’ny governementa, Ntsay Christian, niaraka tamin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Jeneraly Rakotonirina Richard, nidinika ny fomba ampiharana ireo fepetra izay napetraka ho fiarovana amin’ny fianaky ny valanaretina Coronavirus. Mazava ny hafatry ny Praiminisitra nandritra izao fidinana ifotony izao : “Ny fahaizantsika mifehy tena no fitaovana entintsika miaro tena sy miaro ny hafa amin’ny alalan’ny fanarahana ireo fepetra rehetra izay apetraka”.
mercredi, 01 avril 2020 16:07
Ambanja: Maty voatifitra teny ampandosirana i Doudoul, atidohan’ny fakana ankeriny ny zanaky ny Ben’ny tanànan’Antananarivo
Voasambotry ny Zandary tao Ambodivoanio Ambanja ny tolakandron’ny 27 marsa 2020 i Homady Abdoul na i Doudoul, raindahiny amin’ny fakana ankeriny. Voatondro ho atidohan’ny mpanao kidnapping i Doudoul. Tranga fakana ankeriny maromaro no mahavoarohirohy azy. Teo ny nahazo an’i Yanish Ismael tamin’ny 14 mey 2017. Doudoul no atidohan’ny fakana ankeriny an’i Natan Andriantsitohaina, zanaky ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra tamin’ny 22 desambra 2017. Mbola izy no tao ambadiky ny fakana ankeriny an’i Richi Chandarana nitranga ny 03 jona 2018, Vasram Sabera ny 6 jolay 2018, Molou Sabir ny 13 oktobra 2018 ary i Malik Kaarmaly sy Sofiane Omrani nitranga ny 08 desambra 2018.
mercredi, 01 avril 2020 16:01
Befotaka Nord: Nasiana barrage sanitaire
Nasiana barrage sanitaire nanomboka androany alorobia 01 aprily eto ampidirana, avy any atsimo, an-tanànan'i Befotaka-Nord, Distrikan'i Analalava, lalam-pirenena faha 6, izay notarihin'ny Dr Patrice, notronin'ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny Polisy Nasionaly, ny Polisy Kaominaly ary ny Zandarimariam-pirenena. Ka raha misy tranga mampiahiahy aorian'ny fitiliana ny mety fiakaran'ny hafanana dia averina haingana any amin'ny hopitaly any Antsohihy ilay olona ahiahiana. Manao izay vitany ireo dokotera sy ireo mpanampy azy, ary indrindra ireo mpitandro ny filaminana, nefa dia tsy misy fitaovana hiarovany tena izy ireo amin'ity valanaretina coronavirus ity. (Jereo Sary Tohiny)